SAMP | Aqalka Furan ee Internetka
Ujeedo iyo Baahi
Talaabo La Soo Jeediyay
Qorshaha Guud ee Madaarka Joogtada ah (SAMP)
dib u eegista deegaanka
Cusboonaysii SIDII JANAAYO 2021
Jadwalka dib-u-eegista deegaanka ee Joogtada ah (NAM) Mashruuca Master Plan Plan (SAMP) ee Muddada-dhow (NTP) waa la kordhiyay.
Waqtiga ayaa lagu darayaa si loo dhammeeyo falanqeyn adag, iyo sidoo kale isuduwid sare oo lala yeesho Maamulka Duulista Federaalka (FAA). Sii deynta falanqaynta dib-u-eegista ugu horreysa ee deegaanka, qabyo-qoraalka Xeerka Siyaasadda Deegaanka ee Qaranka (NEPA) ee Qiimeynta Deegaanka (EA), iyo la socoshada dadweynaha, oo la filayay horaantii 2021, ayaa hadda dhici doonta bartamaha 2021. Dekedda Seattle, iyada oo lala kaashanayo FAA, waxay bixin doontaa cusbooneysiin dheeri ah ka hor inta aan la sii deyn qabyo-qoraalka NEPA EA ee wakaaladda iyo faallooyinka dadweynaha.
Dekeddu waxay sii waddaa shaqadeeda si loo dhammaystiro dib-u-eegista deegaanka ee SAMP NTP. Marka dib-u-eegista deegaanka NEPA ay tahay mid kama dambays ah, oo la filayo horraanta 2022, Xeerka Siyaasadda Deegaanka ee Gobolka (SEPA) dib-u-eegista deegaanka ayaa raaci doonta. Oggolaanshaha komishanka ayaa loo baahan yahay si loo bilaabo shaqada mashruucyada shaqsiga ah.
Hoos ka eeg jadwalka la cusboonaysiiyay.
Macluumaadka sidoo kale waxaa laga heli karaa العربية, somali, Español, Iyo SomGoal rss.
Waa Maxay Qorshaha Guud ee Madaarka Joogtada ah (SAMP)?
Gobolka Central Puget Sound waxaa la filayaa inuu koro hal milyan oo kale sanadka 2035. Qorshaha Master-ka ee Joogtada ah ee Madaarka (SAMP) waa naqshadda isbeddelada Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee Seattle-Tacoma si loo daboolo baahida mustaqbalka la saadaaliyay. Bishii Maajo 30keedii waxay dekeddu billowday olole ballaaran oo soconaya 16 toddobaad ah oo lagu wacyi gelinayo bulshada si loogu casriyeeyo gobolka xaaladda SAMP-ga Madaarka.
SAMP-ka waxaa ku jira Mashaariic-Waqti-dhow oo loogu talagalay Seattle-Tacoma International Airport (Sea-Tac) oo loo qorsheeyay in la dhiso sannadka 2027-ka kuwaas oo diiradda saaraya dib-u-eegista deegaanka. SAMP sidoo kale waxaa ku jira Aragtida-Muddada-dheer ee Badda-Tac oo ay ku jiraan mashaariic aan u bislaan dib-u-eegista deegaanka xilligan, maadaama ay u baahan yihiin daraasad dheeri ah oo aan macquul ahaan la sii saadaalin karin. Kahor inta aan la fulinin mid ka mid ah Mashaariicda Aragtida-dheer, daraasado qorsheyn oo dheeri ah iyo habka ku habboon ee dib u eegista deegaanka ayaa la qaban doonaa.
Dekeddu waxay hadda bilaabaysa daraasad ballaaran oo ku saabsan saamaynta deegaanka ee saamaynta ee SAMP Mashaariicda dhow, iyadoo la waafajinayo Ilaalinta Deegaanka ee Gobolka (SEPA) iyo Sharciga Qaranka ee Ilaalinta Deegaanka (NEPA). Shuruucdani waxay u baahan yihiin ka-qaybgal dadweyne. Dekedda iyo FAA waxay ku martiqaadayaan dadweynaha inay talo ka dhiibtaan baaxadda arrimaha looga hadli doono dukumintiga dib-u-eegista deegaanka, saamaynta ay ku yeelan karto bay'adda ee Mashaariicda Muddada-dhow, iyo beddelaadyo macquul ah. Muddo 60 maalmood ah oo faallooyinka faallooyinka ah ayaa hadda furan si loo siiyo daneeyayaasha dadweynaha iyo hay'adda fursadda ugu horreysa ee suurtagalka ah ee lagu bixin karo talooyinka inta lagu jiro geeddi-socodka dib-u-eegista deegaanka.
Liis dhameystiran oo ka mid ah qeybaha ayaa laga heli karaa adigoo gujinaya halkan loogu talagalay SEPA iyo halkan loogu talagalay NEPA.
Maxaa iyo Sababta
Hadafka Ujeedada iyo Baahida waa qayb muhiim u ah geedi socodka dib u eegista deegaanka. Baahidu waxay qeexaysaa arrinta in la xalliyo. Ujeedadu waa xalka dhibaatada. Ujeedada iyo baahida ayaa loo adeegsan doonaa si loo hago hormarinta habab kale oo loo darso inta lagu guda jiro dib u eegista deegaanka.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma (Sea-Tac) waa ilaha ugu muhiimsan ee gaadiidka laga helo oo u adeega xarunta duulimaadka hawada ee gobolka. Ujeedada Mashaariic-Waqti-dhow waa in la wanaajiyo waxtarka hawlgalka, la jaanqaado koritaanka mustaqbalka, iyo in la siiyo awood dheeri ah oo shidaal ah, oo ay ku jiraan shidaalka duulimaadyada waara.
Shan baahiyo aasaasi ah oo loogu talagalay Mashaariicda Muddada-dhow ayaa la aqoonsaday:
Awoodda terminal-ka rakaabka oo aan ku filnayn si ay ula jaan qaadaan heerarka la filayo ee rakaabka si hufan
Tas-hiilaad aan ku filnayn si loogu qaabeeyo heerarka xamuulka la saadaaliyay si hufan
U hogaansanaan la'aanta tilmaamaha naqshadeynta garoonka diyaaradaha ee Maamulka Duulista Hawada
Daahida xad dhaafka ah ee garoonka
La'aanta keyd shidaal si loo daboolo baahida la saadaaliyay iyo in lala kulmo Hindisaha Shidaalka Duulista Hawada ee Dekedda Seattle
Waxqabadka la soo jeediyay ayaa ah in la hirgaliyo mashaariicda dhow ee lagu tilmaamay SAMP, oo ay ku jiraan ku dhowaad 30 mashruuc oo hagaajinaya hufnaanta, amniga, marin u helka garoonka diyaaradaha, iyo dhismooyinka taakuleynta diyaaradaha iyo garoonka diyaaradaha.
Waxyaabaha muhiimka ah ee waxqabadka la soo jeediyay waxaa ka mid ah dhismaha terminaal labaad, xarun dayactir oo xarunteedu tahay, tas-hiilaadka ka dhoofka garoonka diyaaradaha, hagaajinta waddooyinka garoonka diyaaradaha, iyo ballaarinta xarumaha shidaalka.
Tallaabada la soo jeediyay waxay qaadi doontaa illaa 477,000 oo hawlgallo diyaaradeed oo sannadle ah iyo 56 milyan oo rakaab ah sannadle ah.
Mashaariic-Muddo-dhow ayaa la dhammaystiri doonaa ama la dhisayaa sannadka 2027-ka.
Akhriso dukumiintiyada faahfaahsan